जय श्री दामका कलाकारमाथि निर्देशकलाई नै छैन विश्वास – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsजय श्री दामका कलाकारमाथि निर्देशकलाई नै छैन विश्वास
जय श्री दामका कलाकारमाथि निर्देशकलाई नै छैन विश्वास
December 28, 2018 Tulasa Karki Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- कही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै, कहि नभएको तरिका नेपाली फिल्ममा नै देखियो । फिल्म रिलिज गर्दा थोरै दृश्य बाहिरियो भने निर्माता तनावमा परेर पाइरेसीको मुद्दा हाल्न पुग्छन् । तर, फिल्म जय श्री दामका निर्माता र निर्देशकलाई खै के भयो, फिल्म रिलिज अगावै, सेन्सर नै नगरि १५ मिनेटको दृश्य युटुबमा हालिदिए ।
दर्शकले यो दृश्य मन पराएको खण्डमा फिल्म हेर्न आउँछन् भन्ने विश्वास उनीहरुमा देखियो । तर, यो सही तरिका भने होइन । यसले दर्शकलाई युटुबमै फिल्म हेर्ने बानी बसाइदिन्छ । फेरि, १५ मिनेट हेरिहालियो, बाँकी युटुबमै हेरौला भनेर बस्ने बानीको विकास हुनसक्छ ।
पढेर आएका भनिएका निर्देशक विप्लव उप्रेतीको यो तरिकालाई फिल्मीकर्मीले मन पराएनन् । विप्लवलाई त फिल्मका कलाकारमाथि नै भरोसा छैन । उनले फिल्मको पत्रकार सम्मेलनमा नै आफ्नो फिल्ममा कलाकार, बजेट ठूलो नभएको तर कथा बलियो भएको दाबी गरेका थिए । निर्देशकले कलाकार नै बलियो नभएको ठान्दा ठान्दै किन राखेका होलान् ?
जय श्री दामको १५ मिनेटको दृश्य बाहिरिएपछि यसले तहल्का नै मच्चाउँछ भन्ने सोचेका निर्देशकले त्यो अनुसार केही पनि प्रतिक्रिया पाएको सुनिएको छैन । दर्शक यो फिल्मको १५ मिनेट हेरेर तरंगित भएनन् ।
जय श्री दामको १५ मिनेट रिलिज कार्यक्रम हुँदा आफूहरु कमेडी फिल्म भनेर पनि नहाँसेको गुनासो पत्रकारहरुले गरेपछि विप्लवले हाँस्ने तरिका फेर्न उल्टै सुझाव दिए ।
छक्का पन्जाको जस्तो हाँसो मात्र हाँसो हो भन्ने सोच दर्शक र पत्रकारमा देखिएको भन्दै उनले त्यो फेर्न आग्रह गरेका थिए । तर, कमेडी फिल्मले दर्शक नहसाँए के गर्ने होला ?
जय श्री दामको व्यापार अब एक हप्तापछि थाहा लाग्नेछ । तर, निर्देशकमा देखिएको उच्च आत्मविश्वास र कलाकारप्रतिको अविश्वासले काम गर्छ कि गर्दैन होला ?
jay shree dam movie
हलिउड स्टार माइली साइरसले गरिन गोप्य रुपमा विवाह, फोटो बन्यो भाइरल
‘टुल्की’मा बेनिशा हमाल